मात्रै कागतीको प्रयोगले यस्तो चमत्कारी गर्छ ! «
मात्रै कागतीको प्रयोगले यस्तो चमत्कारी गर्छ !
एजेन्सी । कागतीको चिया धेरै नै स्वादिष्ट हुने भएकोले प्राय सबैले यसलार्ई पिउने गर्दछन् । तर के तपाइँलाई कागतीमा हुने अरु गुणबारे थाहा छ ?कागतीमा स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई प्रभाव पार्ने चमत्कारिक गुण हुन्छ । कागतीले हाम्रो कपाललाई प्राकृतिक रुपमा सुन्दर , बलियो र बाक्लो बनाउन मद्धत गर्नुको साथै छालामा पनि राम्रो असर पुर्याउँदछ । कागतीमा भिटामिन सी पाइनुको साथै एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुने भएकोले यसले बोसोलाई हटाउनमा पनि मद्धत गर्दछ । आज हामी तपाइँलाई सौन्दर्यताको लागि कागतीको प्रयोगबाट हुने फाईदाबारे जानकारी दिन्छौं ।